एमालेले पूरा गर्‍यो दोस्रो चरणमा पनि सतक, हेर्नुस् अहिलेसम्म कसले कति ठाउँ जित्यो ? | NepalDainik
एमालेले पूरा गर्‍यो दोस्रो चरणमा पनि सतक, हेर्नुस् अहिलेसम्म कसले कति ठाउँ जित्यो ?
काठमाडौँ १९ असार – दोस्रो चरणको चुनावमा पनि नेकपा एमालेले अहिले सम्मको अबस्तामा अग्र स्थानमा आएको छ । सोमबार बिहानसम्ममा १०० स्थानमा प्रमूख पल जितेर सतक पूरा गरेको छ । सत्तारुढ दललाई नै चक्मा दिँदै एमालेले शानजदार जित हात पारेको छ । सोमबार बिहान पूर्वमन्त्री नेकपा एमालेका प्रभाबशाली नेता पार्टी सचिब गोकर्ण विष्टले भोट हालेको इस्मा गाउँपालिका र एमाले युवा नेत्री राम कुमारी झाँक्रीको क्षेत्र मदाने गाउँपालिका जितदै एमालेले आफ्नो दोस्रो चुनाबी इनिङ्गमा शतक पूरा गरेको हो ।
असार १४ गते सम्पन्न ३ प्रदेशका ३३४ स्थानीय तह मध्यm सोमबार बिहान यो समाचार तयार पार्दासम्म बिगुल न्यूजको चिवाएचन डेस्कमा प्राप्त जानकारी अनुसार २३१ स्थानीय तहको मत परीणाम औपचारिक रुपमा आएको छ । जस प्रमूख प्रतिपक्षी दल एमालेले १०१ मा जित हात पारेको छ । एमालेले प्रदेश नम्बर १ मा ४७ स्थानीय तह प्रदेश नम्बर ५ मा २५ र ७ मा २९ स्थानीय तह जितेको छ । बैशाख ३१ गते भएको पहिलो चरणमा एमालेले १२५ स्थानीय तह जितेको थियो ।
देस्रो स्थानमा रहेकने नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म ८९ स्थानीय तह जित्दै एमालेलाई पछ्याउँदै गएको छ ।
उता झापाको कचनाकवलमा जितेसँगै दोस्रो चरणमा कमल थापाको राप्रपाले आफ्नो खाता खोलेको छ । पहिलो चरणमा पनि राप्रपाले एक स्थानीय तह जितेको थियो । निकै आशा गरिएको कमल थापाले नेतृत्व गरेको राप्रपा अप्रत्यासित रुपमा खुम्चिएको छ ।
यस्तै पहिले चरणमा खासै जम्म नसकेको संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्तिले ६ स्थानीय तह जितेको छ भने फोरम लोकतान्त्रिकले २ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले २ स्थानीय तह जितेको छ । अब १०३ स्थानीय तहको मत परिणाम आउन बाँकी छ ।
No Comment to " एमालेले पूरा गर्‍यो दोस्रो चरणमा पनि सतक, हेर्नुस् अहिलेसम्म कसले कति ठाउँ जित्यो ? "